Ny akanjo kanto tsara indrindra 2017 - mihidy sy misokatra, miaraka amin'ny vato sy vato, akanjo vita amin'ny volamena sy mofomamy
Ny akanjo tsara tarehy - ireo modely miavaka indrindra sy samihafa
Amin'ny fomban'ny vanim-potoamin'ny fahavaratra, ny fashionista tsirairay dia mieritreritra momba ny fialan-tsasatry ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina ary miezaka ny tsy hianjera. Ny fizaran-taona vaovao, ny mpandahateny dia manolotra akanjo tsara tarehy izay tsy mitovy amin'ireo dikan-teny teo aloha. Ireo modely mety ho an'ny tenany manokana dia afaka haka vehivavy amin'ny endri-javatra sy tarehin-javatra rehetra.
Toaka mahafinaritra 2017
Ny fividianana modely manintona dia ataon'ny solontenan'ny firaisana ara-drariny amim-pitandremana manokana. Ny iray dia misafidy akanjom-borona tsara tarehy, afaka manantitrantitra ny fahamendrehan'ilay sary, ho an'ny olona iray dia zava-dehibe ny manafina ny tsy fahampiana. Olona iray eo amin'ny akanjo dia loko manan-danja, ho an'ny olona iray, ary misy olona iray misafidy fikorontanana sy fihantsiana. Fanatanjahantena ara-panatanjahantena, misaraka sy mifamatotra, anatomika ary lacy - ny safidy natolotra dia goavana, mijanona fotsiny ny misafidy ny safidy tsara ho anao.
Nanomboka nihevitra ny mpikaroka fa tsy ny fampiononana ny kiraro, ny fahaizany ihany, fa ny hatsarana ihany koa, ny fahatsapana fa afaka mitafy ny hafa izy ireo. Ny akanjo kanto tsara indrindra 2017 dia misy ireto karazan-javatra manaraka ireto:
Manintona ny sainam-paty, ny volombava, ny jabots, ny laces, ny tadiny, ny loko ary ny endriky ny endriny, ny applets ary ny sary;
Ny modelim-bolo eo amin'ny vatomamy dia nanjary iray amin'ireo antony manan-danja amin'ny fisafidianana ny modely mety.
Mpamoron-doko maro no nanolotra ny akanjo tsara tarehy tsara indrindra tao amin'ny fanangonany, ka anisan'izany ireto manaraka ireto:
Amin'ny fahavaratry ny 2017, ny monokini misy volombava eo amin'ny tratra na ny jabot dia ho lasa fety amin'ny fahavaratra amin'ny taona 2017, toy ny bodoy izay azo akanjo toy ny fitafiana andavanandro , fa ny lamba kosa dia mety ho azo ampiasaina amin'ny fitarihana safidy tahaka izany amin'ny vanim-potoanan'ny tora-pasika.
Ny tena marina dia mety sy ny hatsikana fanatanjahantena tsara tarehy, manodidina azy io amin'ny fehezanteny tokana no nanambarana ireo mpanakanto lamaody. Noho izany, ho toy ny akora mahaliana amin'ny vokatra ara-panatanjahantena, ny endri-javatra sy ny endrika haingon-trano dia manomboka mipoitra, ary koa ny fananganana, izay nanomboka niala lavitra ireo alokaloka voatokana ho an'ireo tena tsara indrindra.
Mbola eo an-dàlam-be ny loko misy ny loko mainty sy fotsy, izay notsongaina tamin'ny hodi-tady retro.
Sakafo tsara tarehy eo amin'ny tratrany kely
Ny ankizivavy tsy afaka mirehareha amin'ny endrika mihetsiketsika dia afaka haka kiraro tsara ho an'ny tratra kely iray izay tsy manafina azy, fa mamorona endrika volom-borona sy endrika vehivavy kosa. Izany dia tratrarina amin'ny fampiasana vahaolana toy izany:
Ambony ambony miaraka amin'ny kaopy indroa matevina sy fanamaivanana;
Modely maro ao anatin'ilay kitapo dia misy tabilao misy kodiarana, manitsy ny endriky ny tratra ao anaty kaopy;
Ny fanamafisana ny volavolan-tsakafo dia hanampy teknikan'ny fombafomba: ny fanakatonana eo anoloana na ny endriny mamirapiratra, ny fifamaliana eo amin'ny vatany;
Ny Monokines koa dia ho fenoina bodisma matanjaka izay tsy hanafina tratra kely.
Toe-trotraka tsara ho an'ny nono lehibe
Ny ankizivavy manana endrika manintona, izay manana habeny lehibe kokoa noho ny salan'isa, dia afaka mividy modely misy kapa be varahina sy rantsana sy loko mihidy mafy amin'ny vanim-potoana vaovao. Tsy hitodika loatra izy ireo, fa ny mifanohitra amin'izany, amin'ny fomba rehetra azo atao, dia afaka manantitrantitra ny tombontsoa rehetra mety ho an'ity vehivavy ity. Azontsika atao ny manavaka ireo toetra mampiavaka ny vokatra mitovy:
Ny kiran'ny akanjo dia misy "taolana" mahery izay tsy miteraka fikorontanana ary miatrika tsara ny andraikiny. Noho izany, ny tratra dia ho mafy orina, tsy mahatsiaro ho voafatotra;
Ny tendron-tsoratra dia azo atambatra ho mafy orina mafy, fa tsy amin'ny fifandraisana mandaitra, manome fanohanana azo itokisana fanampiny izany;
Ireo kombina mitovy amin'izany dia misy karazana kiraro tsara tarehy, ary modely samihafa.
Sakafo tsara tarehy
Ireo solontenan'ny firaisana ara-drariny, manana endrika mahafinaritra, ireo couturiers dia manome akanjo tsara tarehy ho an'ireo vehivavy izay asehon'ireo karazana toy izany:
Modely samihafa izay manafina tanteraka ireo volavolan-dalàna fanampiny. Hatramin'ny vao haingana, tsy dia misy dikany loatra ho an'ny ankamaroan'ny ankizivavy maro izy ireo, fa ny felam-boninahitra miaraka amin'ny tandroka avo lenta no mihatra amin'ny fitsipiky ny kilemaina fanitsiana, fa tsy mampiditra ny hetsika, tsy niditra ny lamaody. Ao anatin'io andiany io, ary ny ambony dia ambony, mifanaraka tsara amin'ny fiaramanidina milomano.
Tovolahy kanto miavaka tsara ho an'ny ankizivavy feno izay, noho ny fifangaroana loko sy ny lokony, dia manasitrana ny tavy. Nanjary nanjelanjelatra izy ireo, nisarika ny saina, saingy tsy tokony hatahotra izany. Mahavariana ao amin'ny kibo sy ny taolan-damosina tsara tarehy, mibaribary tsara tarehy ny lokon'ny loko miboridana amin'ny endriny manjelatra tsara tarehy sy malefaka eo amin'ny tavy ary manafina ny kibonao.
Modely tsara tarehy swimsuit
Ireo mpialoha lalana malaza amin'ny vanim-potoana fahavaratra ho avy dia tsara tarehy tsara tarehy, anisan'ireo tena tsy hay hadinoina azonao jerena:
Manintona ny saina amin'ny modely amin'ny fomba fanao ara-poko. Ampiasainy am-pahazotoana ny morontongotra, ny kiraro ary ny volombolan-tsolika;
indrindra fa ny akanjo maingoka avy amin'ny kofehy matevina mahatsikaika tsy mahazatra;
Ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehin-doko na kofehy no manantitrantitra ny toetra amam-panahin'ny sary;
Manintona sy manintona ny fiheverana amin'ny vokatra iombonana miaraka amin'ny fantsona mangarahara eo amin'ny vavony na ny vava, miaraka amin'ny fatorana lalina any aoriana. Manasongadina ny endriky ny vehivavy amin'ny endrika izany.
Ny modely iombonana na ny monokini dia ho malaza amin'ny vanim-potoana vaovao, tsy eo amin'ny ankizivavy fotsiny ny "plus" lehibe, fa eo amin'ny tompon'ny ampahany kely. Ny akanjo marevaka matevina dia manana toetra mampiavaka azy ireo:
Ny fanamafisana lehibe dia napetraka amin'ny modely amin'ny fomba ofisialin'ny 80's amin'ny fomba fohy minimalista miaraka amin'ny tsipika mihetsiketsika eo amin'ny andilany sy ny famolavolana lalina any aoriana. Tsy vitan'ny hoe monophonic ihany izy ireo, fa koa amin'ny fomba maro samihafa araka izay azo atao.
Ny fialantsiny amin'ny vanim-potoana dia miaraka amin'ny bodo bodice miaraka amin'ny soroka feno, izay mametaka mafy ny tratra.
Ny fanolanana dia mety ho samy hafa: avy amin'ny fomba retro, izay tanterahina amin'ny fanampiana ny fikotrokotroka ny vatany sy ny bokotra, ho an'ny filalaovana lehibe amin'ny fomba of Boho .
Modely maro monokini dia vita amin'ny kofehy sy ny loko mamirapiratra, miaraka amin'ny loko maromaro.
Zavamaniry miavaka tsara
Ny safidin'ny solontenan'ny firaisana ara-drariny dia nanolotra faribolobona be dia be, izay kofehy tsara tarehy. Izy ireo dia novokarina ho karazana endrika samihafa, amin'ny fomba samihafa. Ity fomba ity dia mamela anao mora foana mankany amin'ny hoditra eo amin'ny hoditra, manokatra ny vatanao. Amin'ny vanim-potoana vaovao dia ho lasa malaza ny antsipiriany:
tsy ireo kodiarana mahazatra miaraka amin'ny kaopy, ary ny tampon-tsofina, voa mafy any ambadiky ny tendany;
Maro ny tady mahazatra sy fifandraisana - io dia iray amin'ireo lamaody amin'ny lamaody amin'ny fahavaratra;
Ny fironana hafa - ny dantelina amin'ny tontonana manontolo, azo atao ny mampiasa loko mifanohitra;
Anisan'ireo alokaloka lamaody - tavy mavo, mavo ary pastel mavokely;
Ny hetsika mahaliana dia ny kiraro tsara tarehy, izay ahafahanao mampifangaro loko samihafa amin'ny tampony sy ny farany, isaky ny mamorona sary vaovao.
Bady tsara tarehy
Ny Fashion tamin'ny fahavaratry ny 2017 dia manolotra vokatra isan-karazany amin'ny akalana sy singa miavaka:
Ny lamaody maoderina dia ny hatsembohana amin'ny tendrony ambany sy avo, toy ny fanongotra ny akanjo, ary ny modely faharoa dia mety ho an'ny ankizivavy feno sy mamy;
Ny kambana miavaka tsara dia hitsahatra tsy ho fanatanjahantena na ho feno fotsiny. Mifanohitra amin'izany kosa, mamadika endriky tara-pahavaratra mahazatra izy ireo, izay azo ampitomboina amin'ny satroka na lobaka mangarahara. Ny vokatra iombonana ao amin'ny style Boho amin'ny embroidery sy flounces dia tena tandindona amin'ny fahavaratra manaraka. Ho an'ny famokarana azy dia misy lamba manokana ampiasaina - ity dia lamba amam-bolo amin'ny foko etol.
Ny akanjo volom-borona sy ny tavy dia hahasarika ny sain'ny olona manodidina. Ny rongony ho toy ny fandraisana amin'ny famolavolana ny fandroana fandroana dia natao mba hamoronana ara-bakiteny ny zava-maneno, noho ny lalao ny masoandro eo amin'ny tarehy vato. Ireto misy fiovana manaraka:
Ny vatokely dia azo atambatra amin'ny kaopy manontolo;
Lasa singa mamirapiratra amin'ny endriky ny loko mihidy izy ireo;
Mahaliana ny mijery ny loko-mena amin'ny fotsy miaraka amin'ny akorandriaka;
Vita amin'ny vatany ny vatokely ary manisy tsimokaretina ny taolam-paty. Ny famenoana ny akanjo tsara tarehy toy izany dia tsy tokony ny fitaovana ihany amin'ny fomba mitovy.
Toe-damba amin'ny embroidery
Ny broderie dia vahaolana vaovao amin'ny famolavolana fandroana. Misy akanjo volom-borona na maromaro miaraka amin'ny embroidery azo alaina amin'ny fomba samihafa:
Raha manao ny embroidery amin'ny kofehy misy kofehy volamena na volafotsy, mandao ny lamosina sy ny floral, dia ity no singa iray amin'ny fomba fanorenana art nouveau rafitra;
raha vita amin'ny kofehin-doko miloko marevaka ny embroidery, manahaka lakroa - boho, endri-pahafahana sy natiora.
Sakafo miaraka amin'ny volamena
Fomba hanehoana ny maha-izy azy sy hisintonana ny saina, dia milomano miaraka amin'ny paillettes. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto ido Anarana iombonana amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny ido Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny ido Ny famaranana amin'ny antsipirian'ny metaly volamena, ny peratra, ny rojo, ny boribory dia tanterahina amin'ny endrika modely na fisaorana, kaopy fanenomana. Ny modely toy izany dia mety amin'ny farany no lazaina ho akanjo tsara indrindra sy lafo.
T-shirt miaraka amin'ny jeans - ahoana no fomba fisafidianana sy fitafy?
Amin'ny ahoana ny akanjo mofomamy misy akanjo - 94 sarin'ireo sary tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Loko misy loko beige
Amin'ny akanjo hanaovana mofomamy mena - sary 36 misy tsipika marefo amin'ny akanjo mena
Ny endrika "pear" - inona no tokony harahina?
Amin'ny inona no hikolokolo mofomamy?
Photoshoot amin'ny fomba ofisialy "50 manga maitso"
Charlotte Casiraghi niaraka tamin'ny zanany lahy sy Dimitri Rassam, mpiara-dia vaovao vaovao, dia hita tany amin'ny seranam-piaramanidina tany New York
Hividy voamaina ao anaty menaka fanosotra
Krupenik ao amin'ny multivark
Sakafo matsiro amin'ny sakafo isan-karazany - mahavariana sy tsotra ho an'ny isan'andro
Fihetsiketsehana ho an'ny Paka ao amin'ny kindergarten
Kitapo ambaratonga fototra ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Amin'ny inona no haka jeans fohy?
Izay tsy fantatrao momba ny vava anao
Firafitry ny fifaninanana ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hanaovana mofomamy amin'ny plastinina?
Candidiasis amin'ny vava - soritr'aretina
Rantsana rongony - ahoana no hitafy?
Afaka mipetraka amin'ny herinandro masina ve aho?
Ny lapan'ny mofo